Ras kambooni - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Raaskambooni)
Isuduwe: 1°38.20′S 41°35.17′E﻿ / ﻿1.63667°S 41.58617°E﻿ / -1.63667; 41.58617
Dhacdaa: 1°38′S 41°35′E﻿ / ﻿1.633°S 41.583°E﻿ / -1.633; 41.583
Raas kambooni (Af-Ingiriis: Ras Kamboni) waa magaalo ku taala Degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, wadanka Soomaaliya, taasi oo dhinaca ku heysa geeska xadka wadanka Kiinya. Magaaladani waxay dhacdaa 274 kilometer koonfurta magaalada Kismaayo. Raas kambooni waa Magaalo ku taalo Jubbada Hoose ee dalka Soomaaliya. Magaalada waxay u dhowdahay xadka kenya. Ras Kambooni waa dhul baaxadiisu ay aad u balaarantahay oo kayma fara badan ay ku yaalaan. Qabiilka dagan waa gaaljecel
1 Dadka degan
Dadka deegaanka waxay isugu jiraan xoola dhaqato iyo beeraleey in kastoo ay jiraan ganacsato yar oo aad ku arkeyso daafaha magaaladda. Raas Kambooni waxaa deegaan ahaan iska leh beesha Gaaljecel gaar ahaan Axmad Aadan iyo Odacad iyo dirisame waxaana la dega reer xeebeedka ay kamid yihiin BAAJUNI oo ay ka mid tahay magaalooyinka ay ka dagaan jubooyinka. magaaladu waxay caan ku tahay kaymo badan oo ka xiga daafaha magaalada dadka degan waa dad horu marsan oo ku caan baxay isjacaylka iyo wada noolaanshaha in kastoo gobolku soo maray isbedelo siyaasadeed hadana saamayn saasa kuma yeelan daganaanshaha magaaladan taariikhiga ah.
Cidhifyada wadanka Soomaaliya
Afmadow · Jamaame · Kabsuuma · Kismaayo · Mareerey · Ras kambooni
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ras_kambooni&oldid=201664"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Juun 2020, marka ee eheed 06:47.